Mya Sein Taung
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက.. ခင်ဗျားတို့ မြို့ အပြော၊ မြို့ အသုံးအနှုန်းတွေက အင်မတန် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဟိုကိစ္စလေးရှိလို့၊ ဒီကိစ္စလေးရှိလို့၊ တပည့်တော်(တရားကိုဆောက်ချ) လုပ်မလို့ သေချာစဉ်းစားထားပါတယ်၊ လုပ်ကိုလုပ်မှာ။ တကယ့်သူတော်ကောင်းကြီးတော့ မအောက် မေ့လိုက်နဲ့။ သူပြောနေတာ (တရားကို) ရှောင်ဖို့လို့ လျှောက်ပြီးတော့ စကားတွေ ခင်းနေတာ မဟုတ်လား။။
ရေဥပမာတရားတော် (သတ္တမပိုင်း) (ဓမ္မမှတ်စုများ-၁၂)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး တချို့ကလည်းပဲ တရားအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲတို့၊ ဘာတို့ ကဲ့ရဲ့တာ ရှိသေးတယ်လေ။ အားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အုတ်နီခဲ မဖြစ်ဘူး။ သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ အုတ်နီခဲဆိုတာ ရေထဲချလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ (မြုပ်မှာပါ ဘုရား။) သူတော်ကောင်း တရားအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကဲ့ရဲ့တာတု့ိ၊ အနှောင့်ယှက်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အကုသိုလ်ကြီးတယ်။ အဲဒါ သေရင် အပယ်ကျ မှာဘဲ။ ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲတို့ ဘာတို့ သူက လျှောက်ပြီးတော့ သူများ ကဲ့ရဲ့တော့ နောက်ကျတော့ သူဘဲ အကုသိုလ် ဖြစ်နေတာ။
နံပါတ်(၃) ပုဂ္ဂိုလ်ကို ချဲ့ပြောနေတာနော်။ (မှန်လှပါဘုရား။) လောကမှာ နံပါတ်(၃) ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မများ ဘူးလား။ (များပါတယ်ဘုရား။) ခုနတုန်းက တခါတည်း တန်းကျမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်က နံပါတ်(၁)နဲ့ နံပါတ်(၂)။ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ရယ်၊ ပဉ္စာနန္တရိယကံ ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တန်းပြီးတော့ မြုပ်မယ်။ နည်းနည်းလေး တစ်ဘဝ၊ နှစ်ဘဝလောက် နေပြီးတော့ မြုပ်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်က သဒ္ဓါတရားတွေ ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အကုသိုလ်တွေများတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သူလည်းကျမှာဘဲ၊ မြုပ်မှာဘဲ။ ဒီတော့ နံပါတ်(၃) ပုဂ္ဂိုလ်က ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေတော့ လုပ်ပါတယ်တဲ့။ ကမ်းမရှာဘူး။ ကမ်းမရှာဘူး။ ဝိပဿနာတရား နာလည်းမနာဘူး၊ အားလည်း အားမထုတ်ဘူး။ ကုသိုလ်တော့ လုပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကုသိုလ်လုပ်တာလဲ။ ခံစားဖို့၊ စံစားဖို့၊ တဏှာကြီးနဲ့လုပ်တာနော်။
တချို့ကျတော့ ဒေါသနဲ့လုပ်တာ ရှိသေးတယ်။ တချို့ကျတော့ ဒီလူကငါ့ကို မတရားလုပ်ထားတယ်။ နောက်ဘဝကျရင် ပြန်ပြီး လက်စားချေနိုင်ရပါလို့၏ အဲဒီလိုလုပ်တာတွေလည်း မရှိဘူးလား။ (ရှိပါတယ် ဘုရား။) လောဘ၊ ဒေါသနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုကတည်းက သူ့မှာ အကုသိုလ်က ပါနေပြီ။ နောင်ပြန်ပြီးတော့ သူ ဘီလူးဖြစ်မယ်၊ ဘာဖြစ်မယ်၊ တစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ပြန်ပြီးတော့ လက်စားချေတော့ အကုသိုလ် မများဘူးလား။ (များပါတယ်ဘုရား။) အဲဒီတော့ သူမြောနေတာဟာ ဘယ်အတွက် မြောနေတာလဲ။ (မြုပ်ဖို့အတွက် မြောနေတာပါဘုရား။) အဲ မြုပ်ဖို့အတွက် အရှိန်ယူနေတာ။ ဝဲထဲမှာ ချာလပတ် လည်နေတဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေ ကြည့်ပါလား။ လည်လည် လည်လည် နောက်ပိတ်ဆုံးကျတော့ ဘာဖြစ် သွားတုန်း။ (မြုပ်သွားပါတယ်ဘုရား။)
အေး… မြောချင်တဲ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမြောကြိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ မြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ ဒို့သူငါဟာ အဲဒီထဲမှာ ပါတာများတာ။ ဟောတဲ့သူရော၊ နာတဲ့သူရောလေ။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အခုကတော့ မဟုတ်ဘူး ပေါ့ဗျာ၊ ဟိုတုန်းကလေ။ ဟိုတုန်းက အဲဒီလို အမြောကြိုက်ခဲ့လို့ အခုထိမြောလာတာ မဟုတ်လား။ (မှန်လှပါဘုရား။) ဂင်္ဂါဝါဠုသဲစုမက ဘုရားတွေ အကုန်လုံးရှောင်တိမ်းပြီးတော့၊ မလွတ်လွတ်အောင် ရှောင်ပြီးတော့ မြောလာတာ အခုဒီရောက်လာပြီလေ။ အခု ဒီနားရောက်လာပြီ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ မြောလိုက်တဲ့နေရာမှာ၊ ဘုရားတရားသံဃာကို ရှောင်တဲ့နေရာမှာ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ရတယ်တဲ့။ ကောင်းတဲ့ ဧတဒဂ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်၊ ဒုက္ခရောက်မယ့် ဧတဒဂ်။ ဘုရားကိုရှောင်တတ်တယ်၊ တရားကိုရှောင် တတ်တယ်၊ သံဃာကိုရှောင်တတ်တယ်၊ တရားပွဲကိုရှောင်တတ်တယ်၊ တရားထိုင်တာကို ရှောင်တတ် တယ်၊ တရားရိပ်သာကိုရှောင်တတ်တယ်၊ ကောင်းတာမှန်သမျှကို ကျင်ကျင်လည်လည် မရှောင်တတ် ဘူးလား။ (ရှောင်တတ်ပါတယ်ဘုရား။)
အမလေး အပြောလေးက အင်မတန် ချိုသာတာပဲတဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက။ ခင်ဗျားတို့ မြို့ အပြော၊ မြို့ အသုံးအနှုန်းတွေက အင်မတန် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဟိုကိစ္စလေးရှိလို့၊ ဒီကိစ္စလေးရှိလို့၊ တပည့်တော် လုပ်မလို့ သေချာစဉ်းစားထားပါတယ်၊ လုပ်ကိုလုပ်မှာ။ တကယ့်သူတော်ကောင်းကြီး တော့ မအောက်မေ့လိုက်နဲ့။ သူပြောနေတာ ရှောင်ဖို့လို့ လျှောက်ပြီးတော့ စကားတွေခင်းနေတာ မဟုတ်လား။ လုပ်မလို့၊ လုပ်မလို့ သေသေချာချာတော့ တပည့်တော် စိတ်ကူးထားပါတယ်။ တပည့်တော် လုပ်ရင် တော့ အပြတ်ပဲတဲ့၊ ဟာ အခုကတည်းက ပြတ်နေတာ။ လုပ်ရင်တော့ အပြတ်ပဲတဲ့။ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ် သေး ဘူး။ အဲဒီလို ကြိမ်းနေတာနဲ့ဘဲ ခတ်ကွင်းပြင် ရတာနဲ့ဘဲ ဘာမှအလုပ်မဖြစ် တော့ဘူး။ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက မများဘူးလား။ (များပါတယ် ဘုရား။)
အေး… အဲဒါကြောင့် တစ်သံသရာလုံးက တို့က ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကြံကြံဖန်ဖန် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ရှောင်တတ်တယ်။ ရှုံ့မဲ့ပြီး ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာလို့ဆို ပညာကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုး။ ပညာကြီး တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ရှောင်တာမဟုတ်လား။ အကြောင်းပြချက်ကလေးတွေကလည်း အင်မတန် မခိုင်မာဘူးလား။ (ခိုင်မာပါတယ်ဘုရား။) နားထောင်တဲ့သူများ ဘယ်လိုမှကို ပြန်ကို ပြော စရာကို အကွက် ကို တစ်စက်မှကိုမရအောင် ပြောချလိုက်တာ။ ဒီဟာလေး ပြီးရင်တော့ လုပ်မလို့ဘဲ၊ တကယ်ကိုလုပ်မှာ၊ တပည့်တော်က အင်မတန်ကြည်ညိုတာ ဘဲဆိုပြီးတော့ အဲဒါနဲ့ ဘဲ နှစ်ပေါင်း သောင်းခြောက် ဆယ်ကြာ သွားတယ်။ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
အဲဒီလိုနဲ့ဘဲ တို့သူငါတွေ ဘုရားအဆူဆူလွဲခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ (မှန်လှပါဘုရား။) အဲဒါ နာတဲ့သူ တင်မကဘူး၊ ဟောတဲ့သူလည်း မပါဘူးလား။ (ပါပါတယ်ဘုရား။) အေး… ဟိုတုန်းက မြောခဲ့တာတော့ ထားတော့။ အခုတစ်ခါ ထပ်မြောရင်တော့ သူတော်ကောင်းတို့ ပင်လယ်နား နီးပြီနော်။ (မှန်လှပါဘုရား။) ဒီသာသနာ ၂၅၀၀ ကျော်သွားပြီ။ နောက်ဆိုရင် သာသနာပတော့မယ် မဟုတ်လား။ သာသနာပလို့ိရှိရင် လူဆိုး၊ လူမိုက်တွေ မများဘူးလား။ (များပါတယ်ဘုရား။) အခုတောင်မှ မများဘူးလားဗျာ။ (များပါတယ် ဘုရား။) အခုတောင် များတယ်ဆို နောင်ဆိုရင် ပိုမဆိုးနိုင်ဘူးလား။ (ဆိုးနိုင်ပါတယ်ဘုရား။)
လူဆိုးလူမိုက်ကြား ထဲများ ကိုယ်ကသွားဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဗျာ။ လောဘတွေဖြစ်၊ ဒေါသတွေဖြစ်၊ မောဟ တွေဖြစ်၊ သူတို့ဓါတ်တွေကူး။ သူတို့အယုတ်တမာဓါတ်တွေ ကိုယ့်ထဲကူးရင် ကိုယ်လည်း အပယ်မကျ နိုင်ဘူးလား။ (ကျနိုင်ပါတယ်ဘုရား။) ဓါတ်က ကောင်းတဲ့ဓါတ်က ကူးရတာခဲယဉ်းတယ်နော်။ ကောင်းတဲ့ ဓါတ်က ဒီမှာ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ (၂)ခါပဲရှိတယ် ဓါတ်က။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဦးရေဝတ ဒီမှာ ဓါတ်တွေပေးတယ် မဟုတ်လား သူတော်ကောင်းတို့။ ဓါတ်တွေပေးနေတာ သိပ်မလာချင်ဘူး၊ နံပါတ်ပေး မှသွားချင်တာ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ကောင်းတဲ့ဓါတ်က တော်ရုံတန်ရုံ မကူးဘူးဗျ။ ဝိပဿ နာဓါတ်က။ မကောင်းတဲ့ဓါတ်က ကူးရတာ လွယ်တယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ လောဘ ဖြစ်စရာဆို လောဘဖြစ်မယ်၊ ဒေါသဖြစ်စရာဆို ဒေါသဖြစ်မယ်၊ မောဟဖြစ်မယ် အဲဒီ တော့ ဒို့သူငါ အခုချိန်ခါမှာ မြန်မြန်ကမ်းကိုရှာမှ။ နံပါတ်(၄) ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောနေတာ သူတော်ကောင်းတို့။ (မှန်လှပါ ဘုရား။)
ကမ်းကိုမရှာပဲနဲ့ မြောမယ်ဆိုရင်တော့ သူတော်ကောင်းတို့ ပင်လယ်ထဲ ရောက်တော့မယ်နော်။ (မှန်လှ ပါဘုရား။) ပင်လယ်ထဲ ရောက်ရင် ကမ်းမမြင်၊ လမ်းမမြင်ဆိုတော့ မြုပ်ဖို့ကတော့ မကျိန်းသေဘူးလား။ (ကျိန်းသေပါတယ်ဘုရား။) မိမိတို့ကလည်း ပုထုဇဉ်တွေဘဲ၊ ရဟန္တာတွေ မဟုတ်သေးဘူး။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်း ကျင်က ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း လူမိုက်တွေကလည်း ပုထုဇဉ်တွေမဟုတ်လား။ (မှန်လှပါဘုရား။) သူတို့က လောဘ၊ ဒေါသဖြစ်ရင် ကိုယ်လည်း လောဘ၊ ဒေါသဖြစ်မှာဘဲ။ အတူတူဘဲမဟုတ်လား။ (မှန်လှပါ ဘုရား။) အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ရှေ့ရေးကို ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် အင်မတန် ရင်လေးဖို့ ကောင်းတယ်နော်။
ဒါကြောင့်မို့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ စာအုပ်ကြီးတွေ အများကြီးထုတ်ခဲ့တယ်။ အပင်ပန်းခံ ပြီးတော့ကို ထုတ်တာ။ အများအတွက်၊ နောင်အနာဂတ်သာသနာဆိုပြီးတော့ ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသတို့ ဘာတို့၊ နောက် ဟိုးဘက်က သာသနာ့ဝံသတို့ ဘာတို့ ဆရာတော်ကြီးတွေ ရေးခဲ့တာတွေ အများကြီးဘဲ။ မဟာစည်ဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့က ဟောခဲ့တယ် အများကြီးဘဲ။ နောင်အနာဂတ်မှာ လူတွေက တရားတွေ ပျက်ကြမယ်။ တရားတွေပျက်လို့ရှိရင် အပယ်ရောက်မယ့်သူ များတော့မယ်။
အဲဒီထဲမှာမိမိတို့ မပါအောင် အခု မမြုပ်သေးတဲ့ အချိန်အခါမှာ၊ မှောင်မည်းနေတဲ့အချိန် အခါမှာ၊ လျှပ်စီးလေးလက်တဲ့ အခါမှာ ဘာကိုရှာရမတုန်း။ (ကမ်းကိုရှာရမှာပါဘုရား။) လျှပ်စီးလက်တယ်ဆိုတာ ယောဂီတို့ အားထုတ်ဖို့ အခွင့်အရေးရတဲ့ အချိန်အခါမှာ အားထုတ်ဖြစ်အောင် အားထုတ်ပါ။ တရားနာဖို့ အခွင့်အရေးရတဲ့ အခါမှာ တရားနာဖြစ်အောင်နာပါ။ မှောင်ပိန်းနေတဲ့ အခါမှာ ရှာလို့ရပါ့မလား။ (မရပါ ဘူးဘုရား။) သန်းခေါင်အချိန်အခါလည်း ဖြစ်နေတယ်၊ လမိုက်ရက်ကြီးလည်း ဖြစ်နေတယ်၊ မြစ်ထဲမှာ နောက်ဘေးနားမှာလည်း ချုံပုတ်တွေအများကြီးဘဲ မှောင်ပိန်းနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရှာမလဲ။ ဘယ်မှာရှိမှန်းမသိဘူး ကမ်းက။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ သူလိုကိုယ်လို သားရေး၊ သမီးရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ သူလည်း မှောင်ပိန်း၊ ကိုယ်လည်းမှောင်ပိန်းဆိုတော့ ကဲ သိပါ့မလား။ (မသိပါဘူးဘုရား။)
ခု.သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေ ရှိနေတယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၊ ကျေးဇူး တော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ စသည်အားဖြင့် ပြန်ပြီးတော့ အဲဒီတရားတွေ ဟောပြော ပြသနေတဲ့ သံဃာတော်တွေရှိနေတယ်။ အဲဒါ တရားဟော တရားနာ နောက်တခါ တရား အားထုတ်တဲ့ အချိန်ဟာ လျှပ်စီးလက်တဲ့အချိန်ဘဲနော်။ လျှပ်စီးလက်တဲ့အချိန်မှာ အပင်ပန်းခံပြီးတော့ သူတော် ကောင်းတို့ ဘာကိုရှာရမလဲ။ (ကမ်းကိုရှာရမှာပါဘုရား။) အဲ… ကမ်းကိုရှာဆိုတာ နိဗ္ဗာန်ကို ရှာခိုင်းတာ။ နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဆိုတာ ဝိပဿနာ အားထုတ်ခိုင်းတာ သူတော်ကောင်းတို့။ အခြေအနေ အချိန် အခါလေး ပေးနေပါတယ်။ သူတော်ကောင်းတို့။ သေချာစဉ်းစားမှ ပေါ်တာနော်။
(Share this page on Facebook)
ရေဥပမာတရားတော် (အဌမပိုင်း) Click here
Vimuttisukha Bliss Facebook မှကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
Copyright © 2010. Mya Sein Taung. All right reserved